China Tile Adhesive Manufacturing Plant Manufacturers sy Suppliers | QuanHua
Tile adhesive orinasa mpamokatra entana fototra no be mpampiasa amin'ny vokatry tanimanga adhesive kapila tanimanga, filler, hafanana fampiasana rafitra fiarovana multiplexé adhesive rihitra etc.
Misy karazana tsotra, semi-fiara sy ny fiara feno karazana kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra .Our ekipa afaka mamaritra ny fototra araka ny habeny sy ny fampiasam-bola atrik'asa.
Fahafahana: 5Ton -100T / H
Floor area: 40-500m2
Mpiasa ilaina: 3-5person
FOB Price: USD 10000-1000000 / SET
Fanaterana ny fotoana: 30-60DAYS
Supply Fahaizana: 100 SET isam-bolana
5T / H Simple Type kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra
10T / H manasa-fiara kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra
Faha-25 manontolo kapila tanimanga adhesive fiara orinasa mpamokatra entana fototra
Tile adhesive orinasa mpamokatra entana fototra ampiasaina hamokarana tanimanga kapila tanimanga adhesive, filler, hafanana fiarovana multiplexé rafitra fampiasana adhesive rihitra, masonry rihitra, rindrina sy ny tany kapila tanimanga adhesive rihitra, anatiny sy ivelany mafana insulation rihitra, Anchorage rihitra, rano-porofo feta, anti-harafesiny feta, tena leveling rihitra, manao fanoherana rihitra etc.
Manana fiteny maro samy hafa karazana kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra , misy kely sy lehibe kapila tanimanga adhesive Mixer milina: 5t, 10t, 15t, 50t, 60t, 80tand 100t etc.Most ny mpampiasa no misafidy mpanelanelana amin'ny tontolo karazana kapila tanimanga adhesive rihitra fototra: 10t, 20t , 30t, 40t, 50t sy 60t .Ny fampiasam-bola dia eo USD10000-USD1000000 araka ny manta sy ny toerana ara-nofo isan-karazany zava-misy.
Masontsivana ara-teknika ny kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra:
Mode fahafahana Area Haavo Fanamarihana
Simple 1-15t / h 40m2 5-10m Manual batching sy ny fonosana
Basic 5-15t / h 40-60m2 6-10m Manual batching, mandeha ho azy fonosana
Manasa-mandeha ho azy serial 5-15t / h 40-80m2 8-12m Automatic batching ny marokoroko ara-nofo, boky fampianarana batching ny additive, mandeha ho azy fonosana
Manasa-mandeha ho azy Tower 5-50t / h 40-100m2 10-25m Automatic batching ny marokoroko ara-nofo, boky fampianarana batching ny additive, mandeha ho azy fonosana
Automatic tanteraka serial 5-100t / h 60-500m2 10-25m Automatic batching rehetra ara-nofo sy ny fonosana manta
Ny fampiasam-bola ho an'ny karazana kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra:
Simple karazana amin'ny boky batching sy fonosana, ny Invest dia ambany;
Manasa-fiara karazana amin'ny Automatic batching ny marokoroko ara-nofo, boky fampianarana batching ny additive, mandeha ho azy fonosana, ny vidiny dia tapaky ny volana vola;
Full-fiara karazana amin'ny Automatic batching ny manta ara-nofo sy ny fonosana, ny Invest avo.
Tsara fanahy àry nifidy modely tsara indrindra ny kapila tanimanga adhesive rihitra fototra araka ny teti-bola sy ny orinasa haben'ny.
Main fanahafana ny kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra:
Sand namaoka Plant
1. Amin'ny alalan'ny fampiasana firaka vy lovia, akanjo, noho ny olon-tsotra 3-4 vy lovia.
2. fampihenana ny fibodoana ny 50%, raha oharina amin'ny varingarina tokana fanamainana.
3. Final Output ny hamandoana dia antoka ho 0.5-1% na latsaka.
4. Ampiasaina mba hanaovan-renirano fasika, ranomasina fasika sns, misy rano bebe kokoa.
Telo Shaft WZ Mixer
1. High mampifangaro homogeneity amin'ny 99,9%
2. High fahombiazana amin'ny 90 ~ 120 isaky ny segondra batch
3. Tsy misy maty ho an'ny fampifangaroana zorony. Tsy misy residual noho ny fanatanterahana
4. Mateza androm-piainany sy mafy orina fampisehoana.
1. ordinatera metering fitaovana, milanja 99,9% hanatratra marina.
2. malefaka fonosana endrika, hanaraka amin'ny vava miditra tsimoramora fonosana milina, misokatra fonosana vava milina, Jumbo kitapo fonosana milina, mety noho ny vovoka sady nampirina entana ara-nofo sy ny materials≤5mm granular.
1.Bucket ascenseur dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra mitsangana fitaovana fampitana.
2.It ny mety ho vovoka sy granular zavatra (toy ny vatosokay, simenitra clinker, lalotra hery, arintany) mitsangana fitaterana.
3. Misy karazana fehin-kibo TD, TH rojo Type, NE lovia rojo karazana, dia afaka nisafidy tsara indrindra nanome modely ho anareo araka ny manainga ara-nofo sy ny hakitroky, haavony.
1. Ny olana fampitandremana teknolojia patanty dia ampiharina amin'ny tontolo ity.
2. Remote fanaraha-maso, rahona fanangonana antontan'isa sy ny aretina, marani-tsaina fahadisoana aretina.
3.There dia mifandray efijery karazana sy ny karazana bokotra.
Antoky ny kapila tanimanga adhesive orinasa mpamokatra entana fototra:
Ny orinasa 's fototra mampiasa fitaovana avo-kilasy fanahafana, kilasy voalohany famolavolana sy ny tsara indrindra hametraka fanompoana, hetsika fitaovana androm-piainany dia tsy latsaky ny 10 taona, fitaovana hafa androm-piainany dia ny 15-20 years.So pls aza misalasala ny mifandray antsika ho antsipiriany bebe kokoa, ny ekipa dia hanome ny tsara indrindra U tsara ASAP.
Previous: QH-50 manontolo-Auto Wall Putty mifanerasera Machine
Manaraka: Vonona Mix sokay Plant
Automatic Dry rihitra Plant
Dry rihitra Mix Plant
Simple Type Dry rihitra Plant
Type Tower Dry rihitra Plant
Atrikasa Type Dry rihitra Plant
Dry Powder Mixer Machine , Wall Putty mifangaro Machine, simenitra Silos, Automatic Dry rihitra Plant, Dry rihitra mifanerasera Machine Miaraka hangalana Coat , Ldh miasa Mixer Machine ,